ब्ल्याक होल: सात अर्ब वर्षअघि भएको एउटा अद्भुत खगोलीय घटना जसमा आठवटा सूर्यको ऊर्जा एकैचोटि निस्कियो – ENEWSTECH
“यो वास्तवमै अद्भुत छ,” फ्रान्सस्थित कोट डाज्युर वेधशालाका प्राध्यापक नेल्सन क्रिस्टेन्सनले भने।
“यो सङ्केत सात अर्ब वर्ष प्रसारित भयो। यो घटना ब्रह्माण्डको ‘ठिक मध्यान्तरअघि’ भयो। अनि त्यसले अहिले पृथ्वीमा हाम्रा उपकरणलाई हल्लाइदियो,” उनले बीबीसीलाई भने।
“हामी यहाँ विलयहरूको पदानुक्रमबारे कुरा गर्दैछौँ, त्यस्ता विलयहरू ठूलाठूला ब्ल्याक होल निर्माण हुने सम्भावित मार्ग हुन्,” उनले भने।
“यो १४१ सौर्य पिण्डमान भएको ब्ल्याक होलको अरू ठूलाठूला ब्ल्याक होलहरूसँग विलय भएको थियो कि! कसलाई थाहा छ र?”
“हामी डिकेक्टरहरूको संवेदनशीलता बढाइरहेका छौँ। अनि हामी एकै दिनमा एउटाभन्दा बढी पत्ता लगाउन सक्छौँ। हामीसँग ब्ल्याक होलहरूको वर्षा हुनेछ!” माक्स प्लान्क इन्स्टिट्यूट फोर ग्र्याभिटेशनल फिजिक्सका निर्देशक प्रा. आलेस्सान्द्रो बुओनान्नोले बीबीसी न्यूजलाई भने।
ती फरक मार्गहरू ‘ड्याम्प्ड मिरर’ भनिने विशेष ऐनाहरूका बीच एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सर्छन्
आईसीसी टी२० विश्वकपः पाकिस्तानी क्रिकेट टोलीलाई समर्थन गर्ने केही मुस्लिम भारतमा पक्राउ